Sun, Apr 5, 2020 at 11:14pm
शनिबार, १२ पौष २०७६,	आहाखबर
काठमाडौं, १२ पुस। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा प्राध्यापक डा. पेशल दाहाल नियुक्त भएका छन् । उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटाको सिफारिसमा उनलाई कुलपति केपि ओलीले नियुक्त गरेका हुन् ।
दाहाल यसअघि त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य भइसकेका छन् । नवनियुक्त रजिष्ट्रारले दाहालले शुक्रबार नै पदबहाली गरेका छन् । त्रिवि ऐन २०४९ को दफा २० को उपदफा ९३० बमोजिमको रजिष्ट्रारको पदावधि ४ वर्ष रहने व्यवस्था छ ।
दाहाल छथर पोखरी-३ तेह्रथुम स्थायी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-३२ कोटेश्वरमा बस्दै आएका छन् ।